UMessi umjaho ngokumelene newashi lomdlalo wokuqala kaLa Liga - iTELE RELAY
Accueil » SPORTS UMessi emncintiswaneni wokulwa newashi umdlalo wokuqala weLa Liga
UMessi ubuhlanga ngokumelene newashi kumdlalo wokuqala weLa Liga
07: 01 ET
Lionel Messi usemncintiswaneni wokulwa nesikhathi sokuthola ithuba lokuvulwa kweLa Liga ebhekene ne-Athletic Bilbao ngoLwesihlanu.
UMessi Ofundiswe yedwa ngoLwesithathu, usebenza nomqeqeshi wezokuzilolonga uJuanjo Brau njengoba eqhubeka nokululama ekulimaleni kwethole.
- Umcabango we-ESPN: Bhalisa Manje
- Iwindi yokudlulisa inini
Ulimale esigabeni sakhe sokuqala ukuthola iziqu ngoMsombuluko odlule futhi uphuthelwe wukuvakasha kwe-US Barca ngeledlule.
Kungenzeka ukuthi uMessi ubuya egcwele Umqeqeshi waseArgentina akazange adlale noma yiliphi lamaqembu amahlanu iBarca futhi akazange abambe iqhaza emqhudelwaneni wokuncintisana selokhu e-Copa America.
U-Ernesto Valverde uthe ngempelasonto edlule kuzoba "nzima kakhulu" ukuthi uMessi abe ukulungele umdlalo wethrekhi nowensimu.
UMessi, obene-32 kuleli hlobo, ulimale egunjini engxenyeni yesibili edlule yesizini edlule kanti umqeqeshi uyenqena ukuzibeka engcupheni ngokudlala naye inkanyezi.
Lo mdlalo uhlelelwe kuphela i-Agasti 25, lapho bezophatha i-Real Betis eCamp Nou kumdlalo wabo wokuqala wasekhaya womkhankaso.
Ompetha baseSpain bahlomele kahle ukubhekana naMessi. Qasha kabusha Antoine Griezmann ushaye igoli lakhe lakuqala le kilabhu empumelelweni edlule ye-4-0 ngempelasonto edlule ebambana neNapoli futhi waba nesizini ephelele nabadlali bakhe abasha beqembu.
Luis Suarez et Ousmane Dembele ophinde wahlabana ngokumelene noNapoli, kungenzeka abe ngumlingani wokuhlaselwa kukaGriezmann.
Kwenye indawo, iBarca ayinakho okunye ukukhathazeka ngokulimala ngaphambi kokuthi ikhethini likhuphuke ngoLwesihlanu eZweni laseBasque. UFrenkie de Jong no UJean-Clair Todibo baphinde baqala ukuqeqeshwa ngoLwesithathu ngemuva kokuthatha umhlalaphansi esifundeni sangoLwesibili njengokuthatha izinyathelo zokuphepha.
UDe Jong, oqashwe kabusha yi-Ajax ngama-euro ayizigidi ezingama-75, unethemba lokuthi uzokwenza umncintiswano wakhe wokuncintisana. yabanqobi baseSpain.
Izwe laseDashi ukhulume kuleli sonto kuphela e-ESPN FC futhi wachaza ukuthi kufanele aqondwe kanjani ngabaqeqeshi bekilabhu ngesikhathi sokuqala ukuze kugwemeke ukulimala.
ngizenzele izinto eziningi, ejimini, njll., kodwa ngaphambi kwesizini, ngaso sonke isikhathi kufanele uqaphele, kufanele ube ulungele, ”kusho yena.
"Abaqeqeshi bathi kuyingozi kancane ukwenza. Kumele ngibe nesineke futhi ngilinde kuze kuqala isizini, bese ngiyakwazi. Basho ngaphandle kwalokho ungalimala. "
Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) http://espn.com/soccer/barcelona/story/3920479/messi-in-race-against-time-for-la-liga-opener
Ukubheka ukuqashwa okusha okuhle kweligi yaseSpain
UDynamo Kyiv ushise umqeqeshi ngemuva kokwehlulwa kweChampions League
ENdiya: Inkantoloigunyaza u-ED ukuba axoxisane noP Chidambaram eTihar Namuhla nakusasa | India News